Budata Safari maka Windows
Free Budata maka Windows (36.70 MB)
Site na interface ya dị mfe ma dịkwa mma, Safari na-ewepụ gị nụzọ gị mgbe ị na-eme nchọgharị na ịntanetị na-enye gị ohere ịnweta ahụmịhe ntanetị kachasị ụtọ mgbe ị na-enwe nchebe. Ihe omume a, nke Apple nwere oke oke banyere ọsọ na nchekwa, na-aga nihu na-emepe emepe maka sistemụ arụmọrụ Windows.
Niji ọtụtụ njirimara dịka arụmọrụ ọsọ ọsọ, interface dị mfe na nke dị mfe, iji ya dị mfe, ọkacha mmasị, igbochi mmapụta, ọchụchọ ọdịnaya, njikwa agagharị, nkwado RSS agbakwunyere, mpempe akwụkwọ na-akpaghị aka, oghere ederede resizable, igodo zoro ezo na nke nzuzo, na nhọrọ nchekwa dị elu. Safari bụ nnukwu ihe ọzọ maka ndị ọrụ Windows.
Ejiri ọtụtụ ọhụụ na atụmatụ dịka HTML 5 offline na-akwadoghị, akara zuru oke site na nyocha Acid 3, Apple Safari dị njikere ime ka ahụmịhe ịntanetị gị nwee nsogbu na ngwa ngwa.
Nha faịlụ: 36.70 MB